दीपकराज जोशी आउट भएपछि को बन्दैछ नयाँ प्रधानन्यायधीश ? — Sanchar Kendra
दीपकराज जोशी आउट भएपछि को बन्दैछ नयाँ प्रधानन्यायधीश ?
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी विवादित बनेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश नबनेमा सो पदमा ओमप्रकाश मिश्र आउने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
न्याय परिषद्ले जोशीसहित मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । जबरा वरियताको आधारमा तेस्रो नम्बरमा छन् । मिश्र २०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । मिश्रले प्रधानन्यायाधीश भए उमेर हदका कारण आगामी पुससम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् उनी तत्कालिन सुशलि कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका पालामा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने अडानमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार पहिले हुन्छ भनेर पछि सरकारको कार्यमा अवरोध गरेकाले उनले नेकपा र मन्त्रीहरुको विश्वास गुमाइ सकेका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।